Huawei P30 Pro ule igwefoto, nke kacha mma n'ụwa? | Gam akporosis
Ejiri igwefoto Huawei P30 Pro mee ihe DXOMARK dị ka nke kachasị mma n'ahịa, na-enye ya ihe na-erughị isi 112. Nke ahụ etinyebere ya ọ bụghị naanị karịa iPhone ahụ a na-etu ọnụ, mana ọ jisiri ike tee ihu nke ọnụ ụzọ kacha elu kachasị elu amalitela naanị otu ọnwa gara aga, dịka Samsung S10 Galaxy's Samsung.
Taa, anyị nwere ebe a igwefoto ule nke Huawei P30 Pro, Ya mere ị pụrụ ịhụ n'onwe gị ma ọ bụrụ na anyị na-ele anya igwefoto kachasị mma enyerela na ekwentị mkpanaaka. Nọnyere anyị n'ihi na anyị na-eweta ezigbo foto na ọdịnaya vidiyo ka ị wee hụ n'onwe gị.
N'isiokwu a, ị ga - ahụghị ule vidiyo, ọ bụ ya mere anyị ji akwado ka ị gafere vidiyo nke anyị hapụrụ n'elu ka na mgbakwunye na foto ndị ahụ, ị ​​nwere ike ịlele ọnọdụ vidiyo. Achọrọ m igosipụta nke ahụ A na-ewepụ agbapụ niile na-enweghị ihe ọmụma doro anya nke foto ma were ya freehand, na-enweghị ụdị njem ọ bụla ma ọ bụ nkwado igwe.
1 Nnwale mbugharị ngwakọ: Ahụtụbeghị tupu
2 Macro na ihe oyiyi ndị ọzọ zuru ezu
3 Akpaka mode, hassle-free
4 A selfie ka o kwekọọ
5 Moddị dịgasị iche iche: Rerato, AI, Aperture na ọtụtụ ndị ọzọ
6 Abalị abalị, nke kachasị elu
Nnwale mbugharị ngwakọ: Ahụtụbeghị tupu
Anyị na-amalite na ikekwe otu n’ime ihe ndị kachasị ịtụnanya anyị hụtụrụla na ekwentị mkpanaaka, anyị nwere mbugharị ngwakọ dị n’etiti dijitalụ na ihe mmetụta nke ihe ruru 50x. O nwere ike iyi ihe egwuregwu ma m ghọtara ya, mana eziokwu ahụ dị iche, 50x ka na-enye karịa ezigbo foto mma, You chọrọ ka anyị hụ ya na anyị?
O doro anya na mbugharị bụ n'ụzọ nkịtị ịtụnanya, ihe oyiyi na mbugharị nke ugboro ise na ugboro iri Ha na-enye anyị ohere ịbawanye ha na-ezuteghị mkpọtụ ma ọ bụ mfu, ma n'ọnọdụ ọkụ dị elu ma n'oge ụfọdụ ikekwe Anyanwụ na-enwu n'ọnọdụ na-ekwesịghị ekwesị. Ma ọ nwere ike iwe iwe, Huawei P30 ka na-agba ọsọ iji wepụta agba dị nkọ, obere mkpọtụ, na ịdị elu ebe niile.
Macro na ihe oyiyi ndị ọzọ zuru ezu
Ihe ọtụtụ na-akpọ ọnọdụ macro, maka ndị ọzọ, ọ bụ naanị ikike ịme foto dị nso. Nke a bụ ihe ebe ọdụ ekwentị na-ada ngwa ngwa, ihe gbanwere na Huawei P30 Pro, na mbido ya, ha adọọla anyị aka ntị maka ihe ruo mgbe anyị ji anya anyị hụ ya ọ na-esiri anyị ike iji ya kpọrọ ihe. Offọdụ n'ime foto ndi a anyị ga-ahapụrụ gị n'okpuru ebe a ka ejiri nanị santimita abụọ were.
Ọnọdụ oghere x2
Na vidiyo ahụ, anyị ahapụla ihe onyonyo anyị na-ese foto nke akara edo edo, Iji gosipụta na ejighi ụdị mbugharị ọ bụla ma ọ bụ ụdị aghụghọ ahụ, foto a dị nso na ngwaọrụ ahụ nke na ọ siri ike ịhazi ya dị ka canons chọrọ.
Akpaka mode, hassle-free
Otú ọ dị, gịnị Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na-ajụ ngwaọrụ mkpanaka bụ na ọ na-enye anyị ohere ịmalite foto n'otu ntabi anya na-enweghị mkpa ịhapụ onwe anyị n'etiti ohere na ntọala na-adịghị agwụ agwụ. Na nke a, Huawei P30 Pro anaghị atụ ụjọ ma ọlị, nke na-agbachitere onwe ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ na ọnọdụ niile, lelee ya na gallery dị n'okpuru.
Kedu ka ị mere? Ewerela foto ndị a n'oge dị iche iche na ọnọdụ ọkụ dị iche iche, yana eziokwu siri ike ịkọ ọdịiche ahụ, ọbụnadị nke a na-ewere mgbe chi bọrọ (ihe dị ka awa 07:00 na Spain) ọ na-eyi ka ọ ga-afọ obere ka ọ bụrụ n'ehihie. Tụkwasị na nke ahụ, a kpọọrọ ha n'efu ma na-enweghị nnukwu nkwupụta.
A selfie ka o kwekọọ
Ndị selfie agaghị na-erughị, igwefoto ketara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ohere niile enyerelarịrị na igwefoto dị n'azụ dị ka igwefoto nwere ọgụgụ isi nke nyere m ahụmịhe kachasị mma nke onye ọ bụla m hụtụrụla na ekwentị mkpanaaka, maara nke ọma ụdị foto ọ na-ese ma gbanwee ihe mmetụta ya.
Standard mputa backlight
Akpaghị aka na ọnọdụ (2)
Modekpụrụ AI (2)
Akpaghị aka mode
Banyere nsonaazụ ya, ọ dịghị ihe ọ bụla "dị oke nzuzu", nke mmadụ ga-atụ anya site na igwefoto nke njirimara ndị a, ọ bụ ezie na nhazi nke mma mode bụ ikekwe kwa kwesiri ngosi ọbụlagodi mgbe ị nwere nkwarụ ma ọ bụ nwee ọnọdụ dị ala karịa igwefoto a na-enye ohere.
Moddị dịgasị iche iche: Rerato, AI, Aperture na ọtụtụ ndị ọzọ
Emeela ọgụgụ isi ka ọ bụrụ na ọ dabara na igwefoto Huawei P30 Pro, ọ maara ihe ị na-eme ma nyere gị aka ịse foto ka mma. O sina dị, Differentdị dị iche iche dị na igwefoto pụtara na, dịka ị pụrụ ịhụ, ịnwere ike ịse foto asaa yiri na dị iche iche n'otu oge.
Doro anya na agba
Ọnọdụ eserese, dịka ị nwere ike ịhụ na foto nke pusi m, Ọ bụ aka ala kasị mma mgbe a ga-apụta na a smart mobile ekwentị, Naanị ị ga-ele anya etu o si ejide afụ ọnụ ma enweghị smudges anaghị eme, nke ahụ bụ ihe ihe mmetụta ToF na-elekọta.
Abalị abalị, nke kachasị elu
Ọnọdụ abalị bụ ihe ọzọ na-eme atụmatụ a Huawei P30 Pro na-ebute ụzọ mbụ, ọhụụ dị elu na ntakịrị udo nke uche na-eme ka ị were ụdị foto a, Achọghị m ibu arọ, mana a kpụrụ ha niile n'ọchịchịrị nke abalị.
Ọfọn, ugbu a ị nwere ihe ahụ, naanị ị ga-ekpebiri onwe gị ma ị nọ n'ihu igwefoto kachasị mma n'ahịa, enweghị m nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị itinye ya n'ihu igwefoto nke Samsung Galaxy nyere. S10 + na iPhone XS Max, yabụ ịbụ ndị kachasị mma na ahịa. Ọ ga-amasị anyị ịkọrọ anyị na Twitter foto gị ewere na Huawei P30 Pro, ya mere soro anyị na @androidsis ma mee ka anyị mara ihe ị chere banyere nnwale a dị egwu nke igwefoto Huawei P30 Pro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Huawei P30 Pro ule igwefoto, nke kacha mma n'ụwa?
Gmail na-emelite wijetị ya na-agbanwe na Imewe Ihe
WhatsApp ga - enyere gị aka izere izipu ozi na - aga n'ihu na otu